निद्रा बिथोल्ने भेरीले कुदुको चित्त कहिले बुझाउला ? « Pariwartan Khabar
16 September, 2020 11:15 am
प्रत्येक दिन भेरी नदीको किनारबाट धमिलो पानी ल्याएर परिवारको तिर्खा मेटाउँदै आएकी काली विक पानीको दुःख हेरेर दिक्क भइसकेको बताउँछन् । “स्वास्थ्य सेवा र सडक भएर मात्र के गर्ने ? फोहोर पानी पिउँदा हप्तामा एक पटक आफन्त बिरामी हुन्छन्, जानीजानी फोहोर पानी पिउनै पर्ने बाध्यता छ । वर्षायाम भन्दा हिउँदमा भेरी नदीको पानी सफा हुन्छ, त्यतिबेला सजिलो पनि हुन्छ”, उनी भन्छन् ।